Isomiso eSomalia sinciphisa ukudla futhi sidale ukufa | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isomiso saseSomalia sinciphisa ukudla futhi sidale ukufa
Isomiso esidalwe wukuguquka kwesimo sezulu sithinta amazwe emhlabeni jikelele. Kodwa-ke, kulawo mazwe athuthukile kancane futhi asengozini enkulu, iyawathinta ngendlela eyonakalisa kakhulu.
ESomalia, babalelwa ku-196 abantu abashonile ngenxa yesomiso kuze kube manje kulo nyaka ngenxa yokushoda kwamanzi. I-UN Office for Humanitarian Coordination (OCHA) isixwayise ngobunzima besomiso futhi iziphathimandla ziphoqeleke ukuthi zimemezele isimo "senhlekelele kazwelonke".
1 Isomiso esibi sishaye iSomalia
2 Ukushoda kwamanzi nokwanda kwezifo
Isomiso esibi sishaye iSomalia
Ngenxa yokushoda kwamanzi, amanani entengo akhuphukile afanayo nemiphakathi iphoqeleke ukuthi iphendukele emithonjeni yamanzi eyingozi lapho amanzi angaphuzwa khona noma engalashwa. Konke lokhu kwandisa ubungozi bokungenwa yizifo ezifana nekholera nohudo.
Ngabantu abangu-196 ababulewe ezifundeni eziyishumi nanye zezwe kanye nabantu abangaphezu kuka-7.900 XNUMX abathintekile ukuqhamuka kwekholera, isimo senhlekelele kazwelonke simenyezelwe yiziphathimandla.
Ukushoda kwamanzi nokwanda kwezifo
Ngokusho kweziphathimandla zaseSomalia, isimo siba sibi nsuku zonke kulesi sifunda. Enye yezinselelo ezinkulu ukuvinjelwa kokutholakala kosizo ngenxa yobukhona beqembu lamaphekula laseSomalia i-Al Shabab, elilawula izindawo ezinkulu eningizimu nasenkabeni yezwe.
Balinganiselwa ezigidini ezintathu abantu baseSomalia abazoba sesimweni esiphuthumayo sokudla ngoJuni 3 nasenqenqemeni lendlala ngenxa yesomiso esibi ezinyangeni ezedlule, ngokusho kwe-UN.
Njengoba kuncipha imvula eSomalia Ukukhiqizwa kokudla kwehliswa ngama-70% kwezinye izindawo zesifunda. Lokhu kudala amanani anyukayo nendlala esongela impilo yabo bonke abantu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isomiso » Isomiso saseSomalia sinciphisa ukudla futhi sidale ukufa
ISpain idinga izimoto ezingama-300.000 kagesi ngo-2020 ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu